महासंघ ठूला घरानाको मात्र ? « Jana Aastha News Online
महासंघ ठूला घरानाको मात्र ?
प्रकाशित मिति : ६ माघ २०७३, बिहीबार ०८:२९
निजी क्षेत्रको अग्रणी संस्था मानिएको नेपाल चेम्बर्स अफ कमर्सले गत साता सम्पन्न ६६ औँ साधारणसभामार्फत व्यापारिक तथा उच्च घरानालाई सम्मान ग¥यो । उद्योग वाणिज्य महासंघका सबै कर्मचारीले यो समाचार थाहा पाउन जरुरी ठान्दैनन्, किनकि त्यहाँका विभिन्न आयोजनामा संलग्न कर्मचारीको मूल्य र महत्व किन बुझ्नुप¥यो अध्यक्ष, उपाध्यक्षले ? व्यापारी न हुन्, प्रधानमन्त्री बोलाएर पाँचतारे होटलमा सभा–सम्मेलन गरे भइहाल्यो ।
कुलमान घिसिङ पनि त्यहाँ सम्मानित भए, त्यहीँ कोही यस्ता व्यक्ति पनि थिए जसले तेस्रो मुलुकमा निर्यात गर्न सघाएबापत सम्मानपत्र पाए । कस्ता व्यक्तिले केसम्म निर्यात गर्न सक्छन् तेस्रो मुलुकमा भनेर कुनै दिन खाँटी कुरो बाहिर आयो भने देशकै बेइज्जत हुन्छ कि हुन्न ? चिनियाँसँग बिहे गरेकी अञ्जु पौडेलको इशा कम्पनी यसरी पुरस्कृत भएको हो । छोरी इशा लुओको नाममा कम्पनी खोलिएको छ । हर्बल प्रोडक्सनको नाममा अनेक चिज निर्यात गर्दा सुन पक्रेझैं ती सम्मानित व्यक्ति समातिए भने के जवाफ दिन्छ महासंघले ? देखाउने र लुकाउने दाँत फरक भएका र फाइदा लिने समूहको पहिचान गर्न सकेको छैन महासंघ नेतृत्वले । हर्बल कम्पनी, कार्गो कम्पनी, गलैंचा उद्योग, तयारी पोशाक, हस्तकला, पस्मिना उद्योग जस्तो नाम दिए पनि यिनले दाम कमाउने नेटवर्क अर्कै छ ।
सर्वसाधारणलाई ठग्दै फाइदा लिन पुगेका यी कम्पनी र यिनीहरूसँग जोडिएका व्यक्तिको वास्तविक यथार्थता र धरातलबारे महासंघले कहिल्यै सोचेको पाइएन, के महासंघ व्यापारीको मात्र हो ? व्यापार भनेपछि जसले जे गरे पनि हुन्छ ? व्यापार भनेको सर्वसाधारण र देशलाई नै लुटेर व्यक्ति धनी बन्नु हो ? सर्वसाधारण किसानले मिहिनेत गर्छन्, उत्पादन गर्छन्, कर्मचारी खटिन्छन् तर सम्मान पाउँछन् अनेकथरी धन्दामा जोडिनेले सानाभन्दा साना किसान र व्यापारीलाई समेत प्रोत्साहन गर्ने काम महासंघको जिम्मेवारी र दायित्वभित्र पर्दैन ? ठूला घरानालाई टेवा दिने मात्र दायित्व हो महासंघको ?